Ciidamo ka tirsan maamulka Koofur Galbeed oo u goostay Al-Shabaab | XORRIYA NEWS
Home Wararka Ciidamo ka tirsan maamulka Koofur Galbeed oo u goostay Al-Shabaab
Ciidamo ka tirsan maamulka Koofur Galbeed oo u goostay Al-Shabaab
Ciidamo ka tirsan maamulka Koofur Galbeed oo u goostay Al-Shabaab ka gadaal markii ay laayeen dad shacab ah.
Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo oo ka imaanaya dagmada Diinsoor ee gobolka Baay ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa amaanka maamulka Koofur Galbeed ay u goosteen Al-Shabaab kadib markii ay laayeen dad shacab ah.
wararka ayaa ku daraya dadka shacabka ah ee la laayahay ay ku sugnaayeen goob maqaaxi ah oo ku taala baartamaha magaalada Diinsoor.
“Dadka shacabka ah ee goobta lagu laayay waxey tira ahaan gaarayaan 14-qofood, waxaana ku jira laba ka tirsan ciidamada Federaalka, sidoo kalana dhaawac saddex qof ah ah ayaa jira” ayuu yiri qof goob jooge oo ah ehelkiisa ay qeyb ka noqdeen dadka geeriyooday.
Waxaa maalmihii la soo dhaafay jiray khilaaf siyaasadeed aad u xoogan uu ka dhaxeeyo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka dagmada, balse halka ciidamada falkaan geystay ay ilaalo u yahiin mid ka mid ah masuuliyiinta dagmada Diinsoor.
Wali waxaa magaalada gudaheeda laga dareemayaa hub aruursi, waxaana macquul ah in dhinacyada isku haya siyaasadda ay wali xal u arkaan in dhiig sii daato.
Madaxda Maamulka Koofur Galbeed ayaan ilaa iyo hadda wax war ah kasoo saarin dhibaatada loo geystay dadka shacabka ah iyo dirirta la sheegay iney u dhaxeyso labadaas masuul ee ka arrimiya Diinsoor.